बढ्दै इन्टरनेट सञ्जाल | Bishow Nath Kharel
बढ्दै इन्टरनेट सञ्जाल
काठमाडौ, मंसिर १५ – तिहार अगाडि नेपालमा एउटा नयाँ प्रविधि थपियो, वाइम्याक्स । उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा दिने उद्देश्यका साथ राजधानीबाट सुरु भएको यो योजनाको काम सोचेअनुसार भए केही वर्षमा नेपाल इन्टरनेटको सञ्जालमा जोडिनेछ ।
वाइम्याक्स प्रविधिसँगै इन्टरनेटका युवा पुस्तामा यसप्रतिको चासो बढेको छ । टेलिकमले सुरुमा कर्पोरेट ग्राहकका लागि मात्र ल्याएको यो सेवा सर्वसाधारणबीच कहिले पुग्छ ? ल्यापटप, मोबाइलजस्ता उपकरणमा वाईफाई सेवा चल्ने व्यवस्था छ, यसमा कसरी वाइम्याक्स चल्छ ? ग्राहकले यो सेवा लिएपछि देशको कुनै पनि ठाउँबाट चलाउन सक्छन् ? यस्ता प्रश्नहरू व्यापक उठेको छ । टेलिकम भन्छ, ‘सहज रूपमा ग्राहकको चाहनाअनुसार वाइम्याक्स सेवा सुरु गरिनेछ ।’ ताररहित प्रविधिमा आधारित यो सेवा लिने ग्राहकले देशभर एउटै एकाउन्टबाट सेवा लिन सक्नेछन् ।
‘यसको पूर्वाधार पूर्व र पश्चिम गरी दुई क्षेत्रमा विभाजन गरेर निर्माण गरिएको छ,’ वाइम्याक्स आयोजना हेर्ने टेलिकमका व्यवस्थापक सुवासचन्द्र साहले भने, ‘सर्वसाधारणले काठामाडौं पूर्वका सबै क्षेत्रमा एउटै एकाउन्टबाट सेवा लिन सक्छन् । पश्चिममा पनि एउटै एकाउन्टले काम गर्ने व्यवस्था गर्न लागेका छौं ।’ टेलिकमले अमेरिकी कम्पनी एयरस्पानसँग मिलेर यसको पूर्वाधार तयार गरेको हो ।
अबको दुई महिनामा सर्वसाधारण ग्राहकका लागि ल्याउने तयारी गरिएको छ । यसका सिंग्नल टिप्न चाहिने उपकरणको व्यवस्था गर्न आउट सोसिङ गर्ने तयारी गरिरहेकाले सर्वसाधारणलाई दिन केही ढिलाइ भएको हो । ‘उपकरणका लागि आउट सोसिङ गर्ने कम्पनी छनोटको काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसले ग्राहकको घरमा उपकरण जडान, मर्मत, वारेन्टीलगायतका सबै सुविधा दिनुपर्छ ।’ यसअघि सीडीएमएलगायतका प्रविधि भित्र्याउँदा आफैंले उपकरण ल्याए पनि त्यसमा खासै सफल नभए पनि उसले अहिले उपकरणको जिम्मा भिन्दै कम्पनीलाई दिन लागेको हो । आउट सोसिङको काम पाउने कम्पनीले सुरुमा कम्तीमा २ ठाउँमा सर्भिस सेन्टर खोलेको हुनुपर्छ ।
यो व्यवस्थापछि सर्वसाधारणका लागि सुरु हुने वाइम्याक्स सेवा प्याकेजको आधारमा लिन सकिन्छ । टेलिकमले वाइम्याक्सको भोलुम बेस -जति चलायो त्यत्ति शुल्क) प्याकेज बनाएर सेवा शुल्क तोकेको छ । जसमा २ सय ५६ केबीपीएस गतिको ५ जीबी इन्टरनेटको मासिक शुल्क ६ सय ५ रुपैयाँदेखि बढीमा ३० जीबीको २ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै ५ सय १२ केबीपीएस क्षमताअन्तर्गत ८ जीबीको ८ सय ५० देखि ४० जीबीको ३ हजार ४ सयसम्म शुल्क तोकिएको छ । एक एमबीपीएस वा सोभन्दा बढी गतिको वाइम्याक्स सेवामा १२ जीबीका लागि १ हजार ३ सय ४० देखि ६० जीबीको ५ हजार १ सय ९० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
मोबाइल सेट वा ल्यापटपमा वाईफाई जस्तो यो सेवा चलाउन सम्भव छैन । ‘वाइम्याक्स भएको ग्याजेट छ भने त्यसमा सोझै चलाउन मिल्छ,’ उनले भने, ‘तर धेरैमा वाइम्याक्स नभएकाले वाइम्याक्स सिग्नललाई वाईफाई बनाउने उपकरण लिनुपर्छ ।’
टेलिकमले थोरै डाटा प्रयोग गर्ने र भ्रमण गरिरहनेलाई केन्दि्रत गरी यूएसपी डिभाइस ल्याएको छ । ५ सयदेखि १ किलोमिटरको सिग्नल टिप्ने यो उपकरण पेनड्राइभजस्तो हुन्छ । फिक्स र झोलामा बोकेर हिँड्ने अनि केही धेरै डाटा प्रयोग गर्नेका लागि इनडोर युनिट ल्याएको छ । ५ किलो मिटरसम्मको वाइम्याक्स सिग्नल टिप्ने यो उपकरणको मूल्य १३ हजार ७४ तोकिएको छ । धेरै डाटा प्रयोग गर्नेलाई केन्दि्रत गरेर कम्पनीले आउट डोर उपकरण ल्याएको छ । जसलाई घरको छतमा राखेर ठूलो भवनमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न प्रयोग गरिन्छ । जसको मूल्य १९ हजार ८ सय तोकिएको छ । आउट डोर उपकरण छतमा राखे पनि त्यसको तार मेन सर्भर ल्याएर जोडिन्छ । त्यसमा आवश्यकताअनुसार पोर्ट राखेर चाहिएको ठाउँमा इन्टरनेट पुर्‍याउन सकिन्छ ।
‘वाइम्याक्सको सिग्नललाई वाईफाई बनाउने खालका यी तिनै उपकरण पाइन्छ,’ शाह भन्छन्, ‘सोझै डेस्कटपमा जोडेर चलाउनेबाहेक ल्यापटप र मोबाइलमा वाईफाई चलाउने सुविधा यसबाट लिन सकिन्छ ।’ तीन महिनासम्म वाइम्याक्स सेवा लिने ग्राहकलाई सेवा सुरुमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ । एक वर्षको प्याकेज लिनेका लागि निःशुल्क आउट डोर र इन डोर उपकरण व्यवस्था गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । एक वर्षका लागि ३२ जीबी प्रतिमहिनाको प्याकेज लिने ग्राहकका लागि कम्पनीले इनडोर डिभाइस निःशुल्क दिने भएको छ । एक वर्षका लागि ४८ र ६० जीबी प्रतिमहिनाको प्याकेज लिनेका लागि आउट डोर डिभाइस निःशुल्क दिने भएको छ । यस सेवामा ग्रामीण क्षेत्रमा कम्तीमा २ सय ५६ किलोविट प्रतिसेकेन्ड र सहरी क्षेत्रमा १ एबीपीएस डाटाको ग्यारेन्टी गरिएको उनले बताए । ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट देशभर पुर्‍याउने योजनाका साथ सुरु भएको यो प्रविधिको विस्तार कति होला ? यो अझै हेर्न बाँकी छ ।
प्रकाशित मिति: २०६९ मंसिर १५ ०२:२१